[Famerenana] Halloween Horror Nights Hollywood - Manolotra Punch Horohoro mahery vaika! - iHorror
Home Vaovao momba ny fialamboly [Famerenana] Halloween Horror Nights Hollywood - Manolotra Punch Horohoro mahery vaika!
[Famerenana] Halloween Horror Nights Hollywood - Manolotra Punch Horohoro mahery vaika!
by Ryan T. Cusick Oktobra 12, 2021
by Ryan T. Cusick Oktobra 12, 2021 259 hevitra
Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood (HHN) dia nandefa totohondry nampihorohoro tamin'ity taona ity! Nahatonga ny talenta hatrizay ny HHN ary manohy ny maha-iray amin'ireo Halloween Haunts ambony any atsimon'i California, ary tamin'ity taona ity dia tsy nisy ankanavaka. Noho ny tsy fisian'ny hetsika tamin'ny taona 2020 noho ny areti-mandringana Covid-19 dia nahatsapa fa mahafinaritra ny mandeha indray ny valan-javaboary ary miaina ny vanim-potoana Halloween Haunt.
Taorian'ny fialantsasatry ny valan-javaboary tamin'ny taona 2020 dia tsy hitako izay antenaina ary somary natahotra aho. Mety ho dondrona ve izany? Sa ho avy mafana ny valan-javaboary ka hanolotra zavatra vaovao? Ho an'ny vanim-potoana 2021, Halloween Horror Nights dia nanolotra maze enina miaraka amin'ny Terror Tram Ride mahery. Ny maze sasany dia naverimberina tamin'ny taona lasa fa mbola voateraka ihany. Ny fanozonana ny boatin'ny Pandora, Ny Haunting of Hill House ao Netflix, Halloween 4: Ny fiverenan'ny Michael Myers, The Exorcist, The Texas Chainsaw Massacre, ary farany, ny tiako indrindra, Biby goavam-be Universal: The Bride of Frankenstein Lives. Ny zaridaina dia nanolotra faritra mampatahotra telo eo amin'ny faritra ambony mba hiaraka amin'ny maze, Chainsaw Rangers, Demon City, ary Universal Monsters: Silver Screen Queenz, toerana nanaovan'ny monster biby vehivavy. Ny Grand Pavilion Plaza ao amin'ny valan-javaboary dia voaravaka amin'ny lohahevitr'i De Los Muertos ary nanome toerana iray ahafahan'ny vahiny mangatsiaka sy misotro zava-pisotro olon-dehibe.
Halloween 4: Ny fiverenan'ny Michael Myers
Matetika, miaraka amina vahoaka tsy zaka sy ora fiandrasana mandritra ny 2-3 ora mandritra ny maze kely (manolo-kevitra hatrany aho eo alohan'ilay tsipika), tsy nahita maso ny fotoana fiandrasana nahatratra ny dimam-polo minitra tamin'ity taona ity aho. Toa voafehy ihany ny valalabemandry, ary tsy nisy olona marobe niditra tao amin'ilay valan-javaboary, ary namidy; ity dia mety ho vokatry ny kaody Covid-19. Mikasika ny fomba fiasan'ny valan-javaboary lohahevitra momba ny protokoloka, dia toa nitandrina be ilay valan-javaboary. Ny valan-javaboary dia nitaky ny hanaovana ny saron-tava rehetra amin'ny maze sy ny toerana anatiny ny vahiny sy ny mpiasa rehetra; na izany aza, nanatri-maso ny mpiasa rehetra aho nanaraka ny kaonty maska ​​ivelan'ireo toerana ireo. Sahabo ho sivifolo isan-jaton'ny vahiny tsikaritro no nisaron-tava teny ivelan'ireo toerana malalaka ireo. Toa tsara fitondran-tena ny rehetra niaraka tamin'ireo mpampitahotra; nisaron-tava ihany koa izy ireo. Faly aho, ary tao amin'ny The Bride of Frankenstein Lives maze, nisaron-tava fandidiana ilay Ampakarina, ary naneho hatsarana mendrika ho andraikitra vaovao maha-dokotera MAD azy! Tena nankasitrahako ny fahatsapan'ilay valan-javaboary sy ny fomba nanatontosany ity manaraka ity. Hatramin'ny 7 Oktobra, raha manatrika voly fialamboly ao amin'ny faritr'i Los Angeles ianao (ao anatin'izany ny Universal), dia tsy maintsy aseho ny porofon'ny fanaovana vaksiny na fitsapana Covid-19 ratsy ao anatin'ny 72 ora alohan'ny hidiranao amin'ny valan-javaboary.
Toetra mahaliana indrindra sy kely indrindra
Ny ampahany tiako indrindra tamin'ny zavatra niainako tamin'ity taona ity, dia ny Terror Tram: The Ultimate Purge. Nahatsapa foana aho fa ny zaridaina dia nanalehibe ny tenany The Walking dead ary fanadiovana misy azy ireo tamin'ny taona lasa. Na izany aza, ny traikefa momba ny fampihorohoroana amin'ity taona ity dia aingam-panahy avy amin'i The Purge franchise, miaraka amin'ny famoahana farany Ilay fanadiovana mandrakizay, dia fatra natahotra tonga lafatra ho an'ny hariva. Ny Terror Tram dia mampiasa ny sary an-tsary backlot an'ny studio sy ny faritra lehibe avy any Ady ny Worlds. Ity traikefa ity dia hahatonga anao hahatsapa ho toy ny eo afovoan'ny fanadiovana ny tena fiainana amin'ny haingon-trano napetraka, ny atmosfera ary ny akanjo. Ny Terror Tram dia manasongadina sary miaraka amin'i Norman Bates eo anoloan'ny trano Psycho ihany koa, ary raha mihaino tsara ianao dia mety henonao reny miantso azy.
Tram-fampihorohoroana: ny fanadiovana farany.
Tram-fampihorohoroana: ny fanadiovana farany
Tram-fampihorohoroana - Ny fanadiovana farany
Raha tery ianao amin'ny fotoana ka tsy maintsy misafidy maze iray hialana amin'ity taona ity, dia hoy aho hoe The Exorcist. Rehefa nanomboka voalohany ny maze taona vitsivitsy lasa izay dia tadidiko fa tsy nanome ahy an'io zava-dehibe io; donto fotsiny ilay izy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nitovy ny fahatsapana. Aza diso hevitra aho, nahafinaritra ahy ny nijery ireo sombin-javatra napetraka, ary misambotra ny sasany amin'ireo seho mampatahotra sy malaza indrindra amin'ny sarimihetsika mahazatra, ary asa tena tsara anehoana ny ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy izany. tsy “mahatsapa izany”, ary nahatsapa ho voaverina rehefa nandeha nitety ny efitrano ianao.
Sakafo sy zava-tsoa mifono lohahevitra
Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood dia manana sakafo sy zava-pisotro maro azo isafidianana. Mpankafy ny Famonoana tao Texas Chainsaw Maze dia afaka misakafo ao amin'ny Family BBQ malaza any Skinface ary mankafy karazan-tsakafo tsy manam-paharoa, aingam-panahy avy amin'ny horohoro. Ilay trano fisakafoanana manao style BBQ Roadhouse tantanan'ny kanibana dia manasongadina toerana tena tiana toy ny:
BBQ Pulled Chicken Sandwich dia natsofoka tamina paty vita amin'ny crinkle
Texas Chili & Cheese Nachos: Texas Chili miaraka amin'ny brisket mifoka sy voadio nopetehina fromazy, jalapeños namboarina ary ranon-dronono marikivy
22 ″ Alika Mafana Monster
Rantsan-tsandroka "Mpandatsa-drà" amin'ny sakafom-bary mamy misy siramamy vovoka sy saosy frezy
Ao amin'ny Plaza de Los Muertos, ny vahiny dia asaina mankafy ny velona sy mankalaza ny maty ao amin'ny trano fisotroana misy lohahevitra miaraka amin'ny safidy labiera sy labiera am-bifotsy ary koa cocktails vita tanana - Marigold Floral Crown, Smoke Margarita, ary The Chamoy Fireball - nanompo tao amin'ny sifotra karan-doha foana. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny kolontsaina samihafa an'i Los Angeles, ny menio ao amin'ny Little Cocina dia misy:
Beef Birria Tacos miaraka amin'ny saosy mena
Green Chili & Cheese Tamale, nanompo an'i salsa Roja
Voasarimakirana Elote Voahosotra dibera sokay ary nopetahana zava-manitra
Chamoy Pineapple Spear
Sary avy amin'ny Universal Studios Hollywood
Ao amin'ny aloky ny "Jurassic World - The Ride", ny vahiny dia afaka mihinana sy misotro ao amin'ny Terror Lab, izay maodely taorian'ny fanadinam-panandramana andrana natao, nofenoina alim-baravarana manjavozavo. Ny lohan'ny Lab's dia manasongadina:
Pizzas mofo frantsay: horonam-borona vita amin'ny hoagie vita an-trano miaraka amin'ny fromazy na pepperoni
Zava-pisotro mifangaro amin'ny ranomandry (Vodka Mule, Rum Mai Tai, Paloma, Margarita)
Cocktail manokana, ao anatin'izany ny lollipop bibikely
Labiera “alina mampihoron-koditra amin'ny Halloween”
Amin'ny ankapobeny, Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood 2021 dia traikefa tsy hay hadinoina, ary ny valan-javaboary dia nanao asa mahatalanjona tamin'ny fiheverana fa avy am-piatoana izy ireo. Ny tsy fisian'ny faritra mampatahotra no hany fianjerana azoko tondroina; taloha, Univeral dia nameno ny faritra fampitahorana azy ireo, matetika dia manodidina ny dimy. Mahazo izany ao anatin'ny drafitra lehibe amin'ny zavatra aho; Azoko antoka fa nisy fisalasalana vitsivitsy, ny lehibe indrindra, hisy ve ny HHN amin'ity taona ity? Azoko antoka fa faly ny zaridaina nanapa-kevitra ny handroso bebe kokoa ary hanome antsika ny Horror Nights amin'ity taona ity. Manontany tena aho matetika hoe inona no mety ho azontsika tamin'ny taona 2020, tamin'ny XNUMX? Gaga ihany koa aho fa nosokafana ny faritra Harry Potter, anisan'izany ny mitaingina; taloha, ity hetsika ity dia nakatona nandritra ny alina nahatsiravina. Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights dia tolo-kevitra azo antoka. Raha ny fandinihako azy dia tsy latsa-danja noho ny tamin'ny taon-dasa ny pass-front-of-the-line.
Norman Bates ivelan'ny trano Psycho - Tram-fampihorohoroana.
Halloween Horror Nights dia handeha amin'ny alina voafantina izao hatramin'ny 31 Oktobra ao amin'ny Universal Studios Hollywood. Azonao atao ny mividy tapakila amin'ny fipihana Eto.
Raha mila fanavaozana manaitra sy atiny manokana ho an'ny "Halloween Horror Nights", dia tsidiho Hollywood.HalloweenHorrorNights.com, toy ny Halloween Horror Nights - Hollywood amin'ny Facebook; Araho @HorrorNights #UniversalHHN amin'ny Instagram, Twitter, ary Snapchat; ary jereo fa velona indray ny fampihorohoroana Halloween Horror Nights YouTube.